Didy fahatelo : « Aza manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitrao » | FJKM Amboniloha
Didy fahatelo : « Aza manononona foana ny anaran’i Jehovah Andriamanitrao »
Didy fahatelo : « Aza manononona foana ny anaran’i Jehovah Andriamanitrao ».
Asan’ny Apostoly 19 :13-16;
Timoty faharoa 2:19
Ny anarana dia sarobidy, raha tsy maintsy hanonona anaran’olona ianao na sendra nahatonona tsy nahay anaran’olona dia tsy maintsy mialatsiny amin’ilay tompon’anarana.
Teo amin’ny Malagasy dia tena tsy azo natao ny nanonona ny anaran’ny Ray aman-dreny izay neverina fa olona ambony sy olona najaina fa natao hoe : « renin’i Ketaka na iendrin’i Kemba…,rain’i Ketaka na iaban’i Kemba na dadan’i….
Maika fa ny anarana’Andriamanitra, tsy azo tonon-tononin fahatany izany fa Masina sy be voninahitara, anarana manan-kaja izany.
Araka ny hitantsika amin’ireo andinin-tsoratra Masina novakiantsika teo ireo. Rehefa maninona ny olona no manononona foana ny anaran’Andriamanitra? Valio
Maro no antony mahatonga ny olona hanononona foana ny anaran’I Jehovah Andriamanitra, entina hanovan-dratsy , hanaronana ny ratsy , ho fihatsarambelatsihy, a o anaty fatairana,…
Heverin’ny olona fa maivana na tsy dia maninona loatra ireny. Tena fahotana be vava ireny satria fandikana ny didy fahatelo, sarotiny mihitsy Andriamanitra amin’ny fanononana ny Anarany ka tsy hataony vitavita foana na afa-maina izay manao izany.
Raha hanonona ny Anaran’Andriamanitra ianao dia tsy maintsy mila fifantohana ka manao fialan-tsiny sy fanajana.